ज्योतिष – ताजा समाचार
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कुन बारमा जन्मेका मानिसलाई कुन पेशा अंङ्गाल्दा हुन्छ फलिफाप ? थाहा पाउनुहोस्
शास्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने मानिसको जन्मबारले पनि उसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । शास्त्र अनुसार कुन बारमा जन्मिएका मानिसले कस्तो पेशा/व्यवसाय गर्दा उसका लागि श्रीवृद्धि हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ केही जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ । आइतबार: आइतबार जन्मिने व्यक्ति निकै भाग्यमानी हुन्छन् । उनीहरुको आयु पनि लामो हुन्छ । यस्ता व्यक्ति कम बोल्ने […]
सिरानीमा हनुमान चालिसा राखेर सुत्नुहोस, मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ
रातिको समयमा निन्द्रा नलाग्ने स म स्या पछिल्लो समय बढिरहेको छ ।व्यस्त जीवनशैली, त नाव, मोबाइल लगायतका उपकरणका कारण राति निन्द्रा नपर्ने स म स्या रहेका छन् । हिन्दू धर्मशास्त्रका विभिन्न ग्रन्थले भने सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि रातिको निद्रासँग ग हिरो सम्ब न्ध रहने बताउँछ । राति राम्रो निद्रा परेन भने शरीर आल […]
यस्ता ६ गुण भएकी युवतीसँग विवाह गर्दा जिन्दगीमा सुखनै सुख
समाजमा अझै पनि शास्त्रीय मान्यतालाई साँचो मान्ने गरिएको छ । शास्त्रमा मानवीय जीवनका विभिन्न पक्षबारे वर्णन गरेको पाइन्छ । समुद्रशास्त्रमा शारीरिक अंगको बनावट तथा रुप रेखा हेरेर कुनै पनि व्यक्तिको भाग्य, गुण र जीवनका विभिन्न पक्षबारे थाहा पाउन सकिने कुराको वर्णन गरिएको पाइन्छ । यसैको आधारमा कुनै व्यक्तिको भविष्य बारे थाहा पाउन सकिने धार्मिक मान्यता […]
समाजमा भनाई छ, घरभित्र मनिप्लान्ट लगाइयो भने पैसा कमाई हुन्छ । अर्थात जति-जति मनिप्लान्ट हुर्कन्छ, फैलन्छ, उत्तिनै घरममा समृद्धि भित्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । मनिप्लान्ट, खासमा एक लहरे वनस्पति हो । यो इनडोर अर्थात घरभित्रै रोप्न मिल्ने प्रजातिको विरुवा हो । मनीप्लान्ट पानी वा माटो दुबैमा रोप्न सकिन्छ । इनडोर प्लान्टको रुपमा लगाउँदा यसले घरको […]
नामको पहिलो अक्षर “A” बाट नाम सुरु हुने व्यक्तिको स्वभाव:
नामको पहिलो अक्षर A बाट आउने मानिस मानिन्छन् धरै नै प्रभावशाली ! तपाईले ज्योतिषशास्त्र तथा हस्तरेखा विज्ञानको बारेमा पढेको अथवा सुनेको हुनपर्छ तर के तपाईले कहिल्यै आफ्नो नाममा विचार गर्नु भएको छ ? कयौँ प्रसिद्ध अभिनेता, लेखक तथा संगीतकारले सफलता पाउनको लागि आफ्नो नाम परिवर्तन गरेका छन् । हरेक व्यक्तिमा उसको नामको प्रभाव अवश्य पर्छ […]
कुन उमेर मा चम्किन्छ तपाईको भाग्य ? ?️ लेखी यसरी पत्ता लगाउनुहोस
हामी सबैले आफ्नो-आफ्नो भाग्य बोकेर आएका हुन्छौँ । मानिसहरुले पाउने सुख, दुख, सम्पत्ति, विपत्ति सबै भाग्यले नै निर्धारण गर्ने गर्दछ । भनिन्छ, दुख पछि सुख अवश्य आउँछ । त्यसकारण सबै मानिसहरुको भाग्यमा सुख, दुख पक्कै छ । फरक यत्ति हो, मानिसहरुले के लाई सुख सम्झिन्छन् र के लाई सुख सम्झन्छन् । हामी सबै हाम्रो राम्रो […]
अध्ययन भन्छ : सिउँदोमा सिन्दूर लगाउनु पनि हा’निका’रक !
विवाहित महिलाहरूले आफू विवाहित भएको पहिचान गराउनका लागि सिन्दूरको प्रयोग गर्ने गर्छन् । सिन्दूरलाई विवाहिता महिलाहरूको मुख्य श्रृंगारको रूपमा लिने गरिन्छ । तर, त्यस्ता सिन्दूर स्वास्थ्यका हिसावले भने हा’निका’रक हुने पाइएको छ । एक अध्ययन अनुसार सिन्दूरमा लिड अर्थात् सी’साको अधिक प्रयोग हुने गरेको पत्ता लगाइएको छ । लिड मानव स्वास्थ्यका लागि हा’निका’रक मानिन्छ । […]
एजेन्सी । भागदौडले भरिएको जीवनमा बाचिरहेका मानिसले धेरै कुरामा ध्यान दिन सकिरहेको हुँदैन । यसका कारण उसको जीवनमा धेरैभन्दा धेरै जटिल समस्याहरु आइनै रहन्छन् । चाहे त्यो जीवन साथीसँगको सम्बन्धमा नै किन नहोस् । कसैसँग यति पनि समय छैन कि आफ्नो जीवनसाथीको जीवनमा के भइरहेको छ बुझ्नलाई । यस्तो अवस्था चलिरहँदा झैझगडाको वातावरण बनिराख्छ । […]
यी १२ किसिमका मानिसहरु कहिल्यै धनी बन्न सक्दैनन् !
काठमाडौं । धनी बन्ने रहर सबै मानिसको हुन्छ । तर अक्सर मान्छेले गरिबी मै आफ्नो जीवन व्यतित गर्छ । मानिस गरिबी हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छ र कमजोरीहरु हुन्छन् । आज हामी त्यही कारण र कमजोरीहरु उल्लेख गर्न गइरहेका छौँ । यस्ता मानिसहरु जसले जीवनमा कहिल्यै धन कमाउन सक्दैनन् । १.सपना देख्ने क्षमता नभएका व्यक्ति : […]
सुरेशचन्द्र रिजाल काठमाडौं। अनुसन्धान तथा खोजकर्ताका लागि प्रकृतिमा हुने हरेक प्रकारका घटना तथा परिवर्तन किन र कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा हुनु स्वभाविक नै हो । धर्म भनेकै विज्ञान हो र विज्ञान भनेकै प्रकृति हो । खगोल विज्ञान एउटा यस्तो विज्ञान हो, जसले सौर्य परिवारमा भएका हरेक घटना तथा परिवर्तनहरुलाई शुष्म भन्दा भन्दा शुष्म ढङ्गबाट वैदिक, […]
खण्डग्रास सूर्यग्रहण : कुन राशिलाई शुभ, कुनलाई अशुभ ? हेर्नुहोस्
ज्योतिषी दुर्गा भण्डारी । काठमाडौं । २०७६ साल पौष १० गते बिहान औंसी तिथिका दिन सूर्य ग्रहण लाग्दै छ । बिहान ८ बजेर ४२ मिनेटबाट स्पर्ष गरि बिहान ११ बजेर १ मिनेटमा मध्य हुँदै बिहान ११ बजेर ३१ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ । खण्डग्रास सूर्य ग्रहण नेपाल, भारत, श्रीलंका लगायत एशियाका सबै देशबाट देख्न सकिनेछ भने […]
वास्तुशास्त्र अनुसार सुत्ने कोठा कस्तो हुनुपर्छ ?
सुत्ने कोठा हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण स्थल हो। यहाँ हामीले दिनको २४ घण्टा मध्ये कम्तिमा ६ घण्टा भन्दा बढि नै विताउँछौं। अधिकाँश घरमा सुत्ने खाट वा पलङ मुनी विभिन्न चिज राख्ने चलन हुन्छ । तर यस्तो गर्नु बास्तु शास्त्रको दृष्टीले खराब मानिएको छ। सके सम्म सुत्ने बेडको मुनी राख्ने चिजको विषयमा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। खासगरी […]